Maxaa Taliyahan Dagaalka Ku Jira Ku Qasbay In "Canshuurta Al-Shabaab Uu Bixiyo"?
Thursday October 29, 2020 - 09:10:06 in Wararka by Burco Office 2
Taliye ka tirsan ciidanka milatariga Soomaaliya ayaa sharraxaad ka bixiyay sida "uu lacag ugu diray al-Shabaab, waliba isagoo dagaal kula jira kooxdaas".
"Ugu dambeyn waxaan ku khasbanaaday inaan iska dhaafo dhismaha guriga ama aan lacagta siiyo Al-Shabaab," ayuu yidhi taliyaha.
"Waxaan ka qoomameynayaa inaan siiyay lacag dhan $3,600 (£2,750), sidaas ayaana lagu dhammeystiray dhismihii aan rabay," ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Mid ka mid ah wakiillada shirkadaha guryaha dhisa, oo ku sugan magaalo xeebeedka koonfurta Soomaaliya ee Kismaayo, ayaa faahfaahiyay sida saaxiibbada ay isla shaqeeyaan ay ugu yeedheen al-Shabaab, "kaddibna u tuseen xog kasta oo ku saabsan lacagihii ay howlaha dhismaha ku kala wadeen sidaasna uga dalbadeen inay lacag loo cayimay bixiyaan - lacagta ay bixiyeenna waa intii ay al-Shabaab dalbatay oo aan waxba ka dhimaneyn".
"Qof beeraley ah ayaa lagu khasbay inuu bixiyo canshuurta gaarigiisa beerta fala, taasoo ah 'canshuurta howsha' xilli xitaa gaarigaas uusan wax shaqo ah heynin oo uu cillad awgeed u fadhiyo."
'Lacagta looma bixiyo si xor ah'
"Bixinta canshuurta al-shabaab ma aha wax aad si xor ah u bixineyso."
"Canshuurta lagu bixiyo meelaha ay jid gooyada u taallo al-Shabaab waxay sahli kartaa in si nabad ah lagu maro dhammaan dhulka ay iyagu gacanta ku hayaan ama ay dagaallameyaashoodu ku sugan yihiin."
Hay'addan ayaa intaas ku dartay in hadda Al-Shabaab ay cashuur ahaan ugu soo xarooto lacag ka badan midda ay aruuriso dowladda federaalka Soomaaliya.
"Dhammaan shirkadaha waaweyn waxay bixiyaan canshuuraha mujaahidiinta, oo ay kujirto tabarucaad sanadle ah oo boqolkiiba laba iyo bar faa'iidooyinka ay helaan," ayuu yiri madaxa machadka Hiraal.
"Shaqaalaha dowladda, wakiillada guryaha, xitaa askarta dagaalka kula jirta Al Shabaab waxaa lagu helay in ay canshuuro siiyaan kooxaha kacdoonka wada." Ayuu sii raaciyay hadalkiisa.